मृत्युको मुखबाट बचेकी नोबेल पुरस्कार विजेता २० वर्षिय मलाला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटिमा पढ्दै – Arthatantra.com
मृत्युको मुखबाट बचेकी नोबेल पुरस्कार विजेता २० वर्षिय मलाला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटिमा पढ्दै
काठमाडौ । मलाला युसूफजिईले ए– लेबलको रिजल्ट ल्याएपछि अक्सफोर्ड युनुभर्सिटीमा पढ्ने अवसर पाएकी छिन् । उनी नोबेल शान्ति पुरस्कार बीजेता हुन् ।
बिहिबार प्रकाशित भएको रिजल्टमा उनले ए –लेबलमा उर्तीण गरेपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिनेको भिड लागेको छ । अब उनले विश्वकै एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड युनुभर्सिटीमा पढ्ने मौका पाउने भएकी छिन् । उनले लेडी मार्गरेट हलमा दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्र पढ्ने अवसर पाउने भएकी हुन् ।
आखिर को हुन् मलाला ?
मलालाको बहादुरीको बारेमा थाहा नपाउने व्यक्ति कमै भेटिन्छन् । उनी हाल उमेरले २० वर्ष पुगिन् । सन् २०१२ को कुरो हो, उनले पाकिस्तानमा किशोरी शिक्षाको लागि आवाज उठाउँदा झण्डै तालिबान समूहले उनको हत्या प्रयास गरेका थिए ।
अब उनले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोले जुन पाठ्यक्रम जुन युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका थिए मलालाले पनि अब त्यही विषय त्यहि युनिभर्सिटीमा पढ्ने छिन् ।
मलालाले पाकिस्तानमा तालिवान शासनको बारेमा अज्ञात डायरी लेखेकी थिइन्। त्यही निहुँमा उनलाई स्कुलबाट घर फर्किरहेको बेलामा टाउकोमा गोलि हानि हत्या प्रयास गरिएको थियो । त्यतिबेला लडाकुहरुले उनका २ जना स्कुलका साथीहरुलाई घाइते पनि बनाए । तर उनी यस घटनाबाट बच्न सफल भईन र
विश्वव्यापी रुपमा परिचित भइन् ।
उनलाई गत अप्रिल महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघले शान्तिको सन्देश फैलाउनेहरुमा सबैभन्दा कान्छी घोषित गरेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७४ भदौ २
देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच काठमाडौँ । देशभर वित्तीय पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको पाइएको छ । मिडिया […]
राधीको आइपीओ बाँडफाँड आज, कस्को भागमा कती ? काठमाडौ । राधी विद्यूत कम्पनी लिमिटेडले पुस ३ गते देखि निष्कासन गरेको ७ करोड ६४ लाख ५५ […]